Research and Development: သစ်မွှေး( from /http://mandalaygazette.com)
Myo Mark Tun
Myanmar @ International News
သစ်မွှေး( from /http://mandalaygazette.com)
သစ်မွှေးကို မြေအမျိုးမျိုးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်သော်လည်း လယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုး၍မရပါ။
သစ်မွှေးစိုက်ပျိုးလျှင် ၁။ ရေရရှိရမည်။ ၂။အရိပ်ရရှိရမည်။ ၃။ရေမ၀ပ်စေရပါ။ ထိုအချက် ၃ချက်နှင့် ညီလျှင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ စတင်စိုက်ပျိုးချိန်မှ ၂နှစ်သား အထိ အရိပ်ကောင်းစွာ ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၂နှစ်ကျော်ပါက အရိပ်ပေးရန် မလိုတော့ပါ။ ရာဘာ သီဟိုဠ် သရက်ပင်များကြား၌ ပင်ကြား စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ သစ်မွှေး စိုက်ပျိုးပါက ၁.၅ ၁ပေခွဲ ပတ်လည် နှင့် ၁ပေခွဲ အနက် ကျင်းတူးပြီး စိုက်ကျင်း အတွင်း N:P:K ၁၅း၁၅း၁၅ (သို့) ၁၆း၁၆း၁၆ ၁ဗူး၊ နွားချေး ၁ပြည်၊ ကြက်ချေး ဗူးတ၀က်၊ မြေဆွေး ၂ပြည် ထည့်၍ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ အပင် တစ်ပင်နှင့် တစ်ပင် ၄ပေ ၆ပေ ၈ပေ ၁၀ ပေ ခြား စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ၄-၅ပေခြား စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အရိပ် ရေ ၁၂လ ပတ်လုံးပေးနိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးပြီး ၄ – ၅ နှစ်ကြာပါက လုံးပတ် ၁၈လက်မ ရှိလျှင် မှိုစတင်သွင်း၍ အဆီ အခဲ ရယူထုတ်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ မှိုသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းများ ပြည်တွင်း ပြည်ပ တွင် များစွာ ရှိနေသည့် အတွက် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
သစ်မွှေးကို ပြင်သစ် အမေရိကန် ကနေဒါ ဟော်လန် အင်္ဂလန် ဂျာမနီ ဒူဘိုင်း ဂျပန် ကိုရီးယား လက်ဘနွန် ဂျော်ဒန် တရုတ် ထိုင်ဝမ် စင်္ကာပူ အိန္ဒိယ ပါကစ္စတန် သီရိလင်္ကာ ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတို့တွင် ဆေးဝါး သောက်ဆေး ကုန်ကြမ်း အမွှေးနံသာ ကုန်ကြမ်း အဖြစ် အသုံးပြုနေကြသဖြင့် တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ သစ်မွှေးဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်၍ အလွန်တိုးပွားလာပါသည်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးသော ဆေးတွင် အဓိက အခန်းကဏက ပါဝင်ပြီး ဈေးကွက်တွင် ၀ယ်လိုအား အလွန်များလှပါသည်။ သစ်မွှေး အခဲ ၁ကီလို ၆၅ကျပ်သား ၀န်းကျင်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ရရှိနိင်ပါသည်။ သစ်မွှေးတပင်လျှင် ၄-၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာ ကျပ်ငွေ အနိမ့်ဆုံး သိန်း ၁၀၀ ရရှိနိုင်ပါသည်။သစ်မွှေးအမျိုးမျိုး ရှိသည့် အနက် မြန်မာ့ သစ်မွှေးသည် အရည်အသွေး အကောင်းဆုံး ဈေးအကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ ယိုးဒယားမျိုးများသည် စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သောကြောင့် သစ်မွှေး ထွက်ရှိမှုများသဖြင့် အသားတင်တွက်နှုန်းကောင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့သစ်မွှေးကို စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါက မြန်မာ့သစ်မွှေးဈေးကွက်တခု ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကြိုက် အများဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
သစ်မွှေး အဆီ အခဲ ကို ဆော်ဒီအာရေဗျ မှ အများဆုံး ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်. လှော်ပန် အမွှေးအနံ့ ထွန်းညှိရာ တန်ဖိုးကြီးသော ရေမွှေး အမွှေးတိုင် သစ်မွှေးမှ လက်ဖက်ခြောက် များ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အပြင် ကုလားအုပ်တွင်ဖြစ်သော ရောဂါများ အသဲရောင် အသားဝါ အဆီဖုံး စီပိုး ဘီပိုး အေအိုင်ဒီအက်စ် တို့ကိုလည်း ခုခံစွမ်းအားမြှင့်စေနိုင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိရှိပါသည်။ သစ်မွှေးပင်သည် ပင်စည်ထဲသို့ ရောဂါရ၍ ရောဂါကို ပြန်လည် တွန်းလှန်ရန် (ဥပမာ- မုတ်ကောင်သည် အမှိုက်ဝင်၍ အမှိုက်ကို တွန်းလှန်ချေဖျက်ရာ ပုလဲ ဖြစ်သကဲ့သို့) သစ်မွှေး အဆီ အခဲ ဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သစ်မွှေး အဆီအခဲ ကို ထုတ်လုပ်၍ ရောဂါကို တွန်းလှန်နိုင်ပါသည်။
သစ်မွှေးပင်သည် ယခင် သစ်မွှေးဖြစ်ရန် အလွန်ကံကောင်းမှ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယခု သစ်မွှေးဖြစ်တည်ခြင်း၏ အကြောင်းအရာကို သိပြီး သစ်မွှေးဖြစ်ရန် မှိုဆေး သံ ဂျယ်လီ အင်ဇိုင်း များ ပေါ်ပေါက်နေပြိ ဖြစ်သဖြင့် သစ်မွှေးပင်မှ သစ်မွှေးဖြစ်ရန် ၁၀၀% သေချာသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
၁ပေ ပင် ၈၀၀ ကျပ်
၂ပေ ပင် ၁၆၀၀ ကျပ်
သစ်မွှေးမျိုးစေ့ (၁၅၀၀ပါ တဗူး) (ကချင်) ၄၀၀၀၀
သစ်မွှေးမျိုးစေ့ ၅၅၀ပါ တဗူး) (ယိုးဒယား) ၃၀၀၀၀
MYANMAR NEWS @ JOURNALS
Forever Space Myanmar eBooks
Beautiful Cork By Nay Moe Nay
MMT. Picture Window theme. Theme images by rajareddychadive. Powered by Blogger.